Indawo yokuphilisa enegalari ye-villa ethe cwaka kwi-Iyo City Ukungena ubuso ngobuso
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguMiko
Sinegalari ye-Masataka Hino, apho unokonwabela imizobo ye-watercolor kunye nemizobo yemigca ebonisa ngokufuziselayo uluntu lwezilwanyana olungaqondakaliyo.
Indawo ekufutshane yimizuzu engama-20 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseMatsuyama
10 imizuzu ngemoto ukusuka Iyo Interchange
Imizuzu eli-10 ukuhamba ukusuka kwisikhululo seJR Iyo-Yokota
Siza kuthatha kwaye sehlise abantu aba-4 kwisikhululo esikufutshane (Isikhululo sase-Iyo-Yokota).
I-Dogo Onsen, i-Matsuyama Castle, ulwandle, iintaba, ii-zoo, iipaki, njl. zingaphakathi kwi-30-minute drive.
Igumbi elinombane wonke, elingenazithintelo, igumbi lokungena ngesitulo esinamavili likhuselekile kubantwana abancinci.
Kukho amachibi kunye namasimi kwindawo ye-1000 square metres, kwaye unokwenza i-hibernate killifish (ngexesha lasehlotyeni kunye nokulala ebusika). I-loquats kunye neepersimmons zinokuvunwa emasimini entwasahlobo nasekwindla. Unokuyithatha ngokukhululekile kwaye uyidle. Nceda uyonwabele njenge villa yelizwe. Philisa ingqondo yakho ngokujonga inyanga neenkwenkwezi ebusuku. Silungisa eyethu irayisi. Unokonwabela ukwenza isidlo ngokulungiselela izithako. Wonke umntu unokuyonwabela, njengamaqela, ukuhamba yedwa, kunye neentsapho ezinabantwana. Ukuhlala ixesha elide nako kuyacetyiswa.
Igumbi lokulala ligumbi le-tatami eli-10 kunye ne-4 tatami mat ububanzi. (Usenako nokuphumla kwigumbi elifana nelaseJapan elineetatami ezi-6 namagumbi ama-2.) Unokunandipha isidlo sakho kwindawo ephangaleleyo kwigumbi lokuhlala, igumbi lokutyela, nekhitshi elineetatami ezili-18. Ukongeza, kukho amagumbi ama-2 anesitayile saseNtshona kunye namagumbi ama-6 aseJapan. Onke amagumbi aneendawo ezinomgangatho omnye, kwaye i-terrace igcwele indalo. Nceda ulonwabele ixesha lokuphumla. Uyakwazi ukubona uhlaza, uhlaza, kunye nohlaza lwamasimi erayisi namasimi kwifestile. Yindawo apho ingqondo iphilisiwe.
4.98 ·Izimvo eziyi-226
4.98 · Izimvo eziyi-226
Ivenkile eluncedo yimizuzu emi-5 ngeenyawo. Ivenkile enkulu yimizuzu eli-10 yokuqhuba kwaye ivulwa kude kube ngu-24:00. Kukho iindawo zokutyela zaseJapan kunye nezaseNtshona ecaleni kwendlela yeSizwe 56. Udederhu lweevenkile lunemizuzu eyi-15 xa uhamba.
Umbuki zindwendwe ngu- Miko
Nceda uqhagamshelane nathi nge-imeyile okanye ngefowuni kwi-airbnb.
Inombolo yomthetho: M380026177
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Iyo-shi